थाहांपाउ फेसबुक र इन्स्टाग्राम कति समय चलाउने ? | NayaMedia
थाहांपाउ फेसबुक र इन्स्टाग्राम कति समय चलाउने ?
शुक्र, साउन २५, २०७५ (August 10, 2018, 12:49 pm) मा प्रकाशित
तपाईं फेसबुक र इन्स्टाग्राम कति समयसम्म चलाउन चाहनुहुन्छ ? थाहै नपाई धेरै समय अनलाइनमा बसिरहनुभएको त छैन ? यदि त्यसो हो भने अब आफैंलाई तपाईंले नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ ।अस्थायी रूपमा मन लागेको बेला यस्तो पद्धतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । फेसबुकका डेभिड गिन्सबर्ग र इन्स्टाग्रामका अमित रानाडिभले ‘ब्लग’ मार्फत भनेका छन्, ‘हामीले मानसिक स्वास्थ्यका डाक्टर, संस्थाहरू र एकेडेमी, अनुसन्धानकर्ताहरूको सहायताले यस्तो ‘टुल’को विकास गर्न लागेका हौं ।’ फेसबुक र इन्स्टाग्रामले आफ्नो साइट चलाउनेहरूलाई समय सीमा राखिदिने व्यवस्था गर्दैछ । विकास हुन लागेको यो पद्धतिले फेसबुक र इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताको समय बचत गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
फेसबुक र इन्स्टाग्राममा राखिएको उक्त ‘पद्धति मार्फत प्रयोगकर्ता आफैंले समयसीमा तोक्न सक्नेछन् । त्यसपछि तोकिएको समयसम्म साइट चलाउन पाइन्छ । ‘नोटिफिकेसन’ बन्द गर्न सकिन्छ ।
गत जनवरीमा फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले घोषणा गरे, ‘फेसबुकमा जति समय खर्चनु हुन्छ, त्यो समय फलदायी हुन्छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस् । फेसबुकलाई हामी दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन चाहन्छौं ।’ ‘फेसबुक र इन्स्टाग्राममा प्रयोग हुने समय सकारात्मक र प्रेरणादायी होस् । समय सीमाले प्रयोगकर्ताको समय बचत होस् भन्ने चाहन्छौं । यहाँ हुने कुराकानी पनि फलदायी होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’ यो पद्धति तपाईंले फेसबुक र इन्स्टाग्रामको सेटिङमा ‘फेसबुकमा तपाईंको समयसीमा’ र ‘तपाईंको सक्रियता’ शीर्षकमा पाउनुहुन्छ ।
फेसबुकले अहिले अन्य सामाजिक सञ्जालहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनुपरेको छ । यो प्रतिस्पर्धा एकदमै दु्रतगतिमा छ । गुगल र एप्पलले ‘समयसीमा राख्ने’ सुविधाप्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेका छन् । यो पद्धतिको विकासबाट हरेक प्रयोगकर्ताले आफैंलाई निश्चित समयसीमामा बाँध्न सक्नेछन् । एप्पल र गुगलले ‘समयको सदुपयोग गर्नुहोस्’ भन्ने आशयका साथ यस्तो सुविधा दिन लागेका हुन् । हरेक परिवारले यो सुविधाको प्रयोग गरेर नानीहरूलाई अत्यधिक सामाजिक सञ्जाल चलाउनबाट जोगाउने छन् ।
आफैंलाई नियन्त्रण गर्न यो सुविधाको विकास गरेको फेसबुकले बताएको छ । बालबालिकाका सम्बन्धमा लामो समयसम्म काम गरेकी लाउरा रान्डलले भनेकी छिन्, ‘फेसबुक र इन्स्टाग्राम आफ्नो साइट सुरक्षित राख्न चाहन्छन् । तर, साइटभित्र भएका अन्य समस्याहरूलाई पनि उनीहरूले समाधान गर्नुपर्छ ।’